Izindaba - Ulwazi lokuhlolwa kwezimpawu zenjoloba
Ulwazi Lokuhlolwa Kokuvalwa Kwesibopho
1. Ziyini izinto zokuhlola zezimpawu zenjoloba?
1) Hlola ukuthi umkhiqizo uhlanzekile yini.
2) Hlola ukuthi umkhiqizo unezinkinga ze-vulcanization;
3) Hlola ukuthi umkhiqizo unamaphutha okusika / onqenqemeni;
4) Hlola ukuthi umkhiqizo unenkinga yokuqala yini;
I-5) Hlola ukuthi ngabe imikhiqizo inamaphutha wokusika;
I-6) Hlola ukuthi ngabe umkhiqizo uqandisiwe, ukhubazekile nokunye ukukhubazeka.
2. Yiziphi izici ezinesici semikhiqizo yophawu?
1) Ukungcola: lezo ezingaxubeki nenhlanganisela zibonisa imibala ehlukile noma izindaba ezisobala zangaphandle kumkhiqizo;
2) Ukuqhekeka: kukhona imifantu esobala engxenyeni engaphakathi nengaphandle noma ezinye izinto zomkhiqizo;
3) Ukwenza ama-degumming: umkhiqizo womkhiqizo uhlukaniswe namathambo futhi awunakuhlanganiswa ndawonye;
4) Ukuntuleka kwempahla: umkhiqizo awunawo umugqa osobala noma ezinye izingxenye zingenawo umjovo weglue noma umjovo weglue onganele noma umkhondo we-glue ocacile;
5) Bubble: ubuso bomkhiqizo ngokusobala buyi-convex futhi buyindilinga;
I-6) Uphawu lokugeleza: kunemigqa esobala ebusweni bomkhiqizo, futhi indawo iyakhanya futhi ilayini;
7) Isikhunta singcolile: ubuso bomkhiqizo ngokusobala abushelelezi ngokwanele;
8) Isikhunta uphawu: ngesikhathi sokwenza noma ukusebenzisa isikhunta, umkhawulo we-concave noma i-convex yendawo ehambelana nomkhiqizo ibangelwa i-bump kanye ne-scratch ye-mold cavity (ukukhubazeka kwemikhiqizo ene-mold mold efanayo okufanayo);
9) Scald: ukushisa okusobala ebusweni bomkhiqizo;
10) Ukulungisa: amazinyo enkinobho avela engxenyeni yokusika, ezolimaza i-colloid yomkhiqizo uqobo;
I-11) Unilateral: izingxenye ezi-symmetrical zithambekele, ngokuya ngokuya ngapha nangapha, noma eceleni noma ngaphandle. Isibonelo, ububanzi bolunye uhlangothi bukhulu kanti olunye uhlangothi luncane, futhi ubukhulu bodonga abalingani;
I-12) Imoto ephukile: kunamamaki okusika asobala endaweni yokusika noma onqenqemeni lokusika aluhambisani futhi lunamanzi;
13) Iglu yokuchichima: engxenyeni yomkhiqizo enamathambo aveziwe, ingxenye eveziwe izombozwa ngeglue;
14) Ukwehluka: ukungcola okuhlukile kumbala womkhiqizo owakhiwe ngenxa yenhlanganisela, isikhunta, njll.
15) Ikhoyili: kukhona indandatho yocingo ebusweni bomkhiqizo;
I-16) Isici sokuqandisa: umkhiqizo uqunyiwe noma uqhekeziwe ngenxa yokusika okokuqandisa.
3. Yini ukukhubazeka komkhiqizo?
1) Isici esibulalayo (a): umkhiqizo awunakusetshenziswa futhi usulwe;
2) Ukukhubazeka okungathi sína (b): ukutholakala komkhiqizo kunciphise kakhulu, umkhiqizo awunakusetshenziswa, futhi umkhiqizo usuliwe;
3) Ukukhubazeka kokukhanya (c): ukusebenza komkhiqizo kuncishisiwe, kepha ukusetshenziswa akuthinteki, futhi umkhiqizo wamukelekile;
4) Micro defect (d): ayinamphumela ekusebenzeni okuhle komkhiqizo. Kungukukhubazeka okubangelwa ukukhiqizwa okungalungile futhi kungasetshenziswa.
4. Yiziphi izindlela zokugweba ukukhubazeka kokubukeka?
1) Esimweni esejwayelekile, kuzolandelwa indinganiso yokubekwa komkhawulo wokubukeka;
2) Umkhiqizo awuvunyelwe ukuba ne-degumming, imifantu nokunye ukukhubazeka okusindayo;
3) Ukungcola, ukuqhekeka, ukushisa, ukuntuleka kwempahla, amagwebu namabhamuza abolile akuvunyelwe ebusweni obusebenzayo, futhi azikho ngaphezu kokungu-2 ukungcola kwesikhunta, amamaki okugeleza nezindawo ezihlanganayo ezingaphansi kuka-2mm 2 ebusweni obungasebenzi;
4) Azikho iziphazamiso ezivunyelwe ebusweni obusebenzayo, udebe lwangaphakathi nolwangaphandle lwesigxobo samafutha kufanele lubukhali, futhi akukho migqa ye-axial evunyelwe ngaphakathi nangaphandle;
I-5) Indandatho engunxande, indawo yokusika kufanele ibe yisicaba, kungabi ne-burr.